यस्तो छ समग्र भक्तपुरको ताजा अपडेट ! | KTM Khabar
यस्तो छ समग्र भक्तपुरको ताजा अपडेट !
२०७४ जेष्ठ ३ गते १०:४७ मा प्रकाशित
३ जेठ, भक्तपुर । भक्तपुर जिल्लाका ३ नगरपालिकाको मत परिणाम आउने क्रम जारी छ ।
भक्तपुर नगरपालिका-१ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीका श्याम खत्रीको प्यानल र २ मा नेपाल मजदुर किसान पार्टीको प्यानल विजयी भएको छ ।
मध्यपुरथिमी–१ मा नेपाली काँग्रेसका सुरज खड्काको प्यानलको पल्लाभारी भएको छ भने वडा नं। २ को वडाध्यक्षमा नेपाली काँग्रेसकै राम थापा मगर विजयी भएका छन । एक महिला सदस्यमा भने एमालेले जित हासिल गरेको छ ।
सूर्यविनायक नगरपालिका– १को वडाध्यक्षमा एमालेका सानुकाजी कायस्थको पूरै प्यानलले जितेको छ ।
सुर्यविनायक नगरपालिकाका नेपाली काँग्रेसका मेयर उम्मेदवारले २०४६ र उपमेयरले १५८९ मत ल्याएका छन् । एमालेका मेयरले २ हजार ६१ ल्याएका छन् भने उपमेयरको मत २३२१ छ । राप्रपाका मेयर उम्मेदवारले ४३९ र उपमेयरका उम्मेदवारले ५६४ मत ल्याएका छन् ।
मध्यपुर नगरपालिका– ३ को जारी मत गणनामा नेपाली काँग्रेस अगाडि देखिएको छ । मध्यपुरका कांग्रेस मेयरमा उम्मेदवार २३४० र उपमेयर २२८९ मतका साथ लिड गरिरहेका छन् । एमालेका मेयरले १८१३ र उपमेयरले १०३५ मत ल्याएका छन् ।
भक्तपुर नगरपालिकामा नेपाली कांग्रेसका मेयरले २५३३ र उपमेयर २३२९ मत पाएका छन् । एमाले मेयर उम्मेदवारले १२१० र उपमेयरले १३५९ मत ल्याएका छन् ।
चाँगुनारायण नगरपालिकामा भने मतदान भइरहेको छ । चाँगुनारायणको साविक नगरकोट मतदान केन्द्रको विवादपछि यहाँ पुनः मतदान भएको हो । नगरकोट बुथको मतदान सकिए लगत्तै यहाँको मतगणना शुरु हुने जिल्ला निर्वाचन कार्यालयले जानकारी दिएको छ ।